KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ɛsono nea ɔsom ahorow ka wɔ ɔkra ho ne nea sɛ yɛwu a ɛba ɔkra no so. Nanso Bible no de nkyerɛkyerɛmu a ɛtɔ asom ma.
Ɔkra tumi wu anaa?
Nnipa pii gye di sɛ ɔkra nwu da. Ebinom gye di sɛ sɛ nipadua dada no wu a, ɔkra no tu fi mu kɔhyɛ nipadua foforo mu ma wɔsan wo no. Afoforo nso ka sɛ onipa wu a ne kra no kɔ baabi foforo te sɛ ɔsoro anaa Ɔbonsam gya mu.
Bible no nka sɛ ɔkra no tena hɔ daa. Ɛtaa ka ɔkra no ho asɛm sɛ ɛwu. Odiyifo Hesekiel a Onyankopɔn ma ɔkyerɛw Bible no fã bi no kaa sɛ wɔbɛtumi akum ɔkra no. Bere foforo nso Bible no kaa efunu ho asɛm sɛ “ɔkra a wawu.” (Leviticus 21:11 NW ase hɔ asɛm) Bible ma yɛhu pefee sɛ ɔkra tumi wu.
“Ɔkra a ɔyɛ bɔne no, ɔno ara na ɔbɛwuo.”—Hesekiel 18:20.
Ɛsono ɔkra no, ɛnna ɛsono nipadua no anaa?
Sɛ onipa te ase a, ɔkra no na ɛma ɔtumi keka ne ho nanso sɛ onipa no wu a, na ɔkra no afi kɔ.
Bible ka ɔbaa bi ho asɛm sɛ ɔwoo “akra.” (Genesis 46:18) Nea ɛkyerɛ ara ne sɛ ɔwoo nnipa a wɔte ase a wɔhome. Nokware mu no, yɛbɛtumi akyerɛ Hebri asɛmfua a ɛgyina hɔ ma “ɔkra” wɔ Bible mu no ase sɛ “obi a ɔhome.” Ɛtɔ bere bi nso a wɔtumi frɛ mmoa nso akra. Afei nso, Bible ma yɛhu sɛ ɔkra no kɔn tumi dɔ aduane. (Deuteronomium 12:20 Borɔfo NW ase hɔ asɛm) Sɛ ɛsono ɔkra no ɛnna ɛsono nipadua no a, anka ɛho bɛhia sɛ ɔkra no home anaa ɛdidi? Bible ka “ɔkra” ho asɛm a, ɛtaa kyerɛ onipa mũ a ne wedeɛ, sɛnea ɔte nka, ne ne suban nyinaa ka ho.
‘Ɔwoo akra dunsia.’—Genesis 46:18.
Sɛ onipa wu a, ɛhe na ne kra kɔ?
Kyerɛwsɛm no ka kyerɛ yɛn sɛ sɛ yɛwu a, nipadua no asɛe, enti “adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa biara nni Adamena mu.” (Ɔsɛnkafoɔ 9:10) Bible san ma yɛhu sɛ obi wu a “ɔsan kɔ ne dɔteɛ mu; da no ara, ne nsusuiɛ yera.” (Dwom 146:4) Ɔkra no wu a, ɛrentumi nyɛ adwuma biara, enti Bible taa de obi a wawu toto obi a “wada” ho.—Mateo 9:24.
Sɛ nnipa a wodɔ wɔn wu a, ɛyɛ a wopɛ sɛ wonya nsɛmmisa yi ho mmuaeɛ: Ɛhe na wɔkɔ? Tebea bɛn na wɔwom? Enti wɔrehu amane? Esiane sɛ Bible ka sɛ wɔn a wɔawuwu nnim hwee nti, ɛnsɛ sɛ yɛma yɛn werɛ ho sɛ yɛn adɔfo a wɔawuwu no rehu amane. Ade baako a ɛbɛtumi ama yɛn ani agye paa ne Yehowa bɔhyɛ. Ɛma yɛhu sɛ Onyankopɔn bɛnyane nnipa anaa akra a wɔawuwuo no nyinaa aba nkwa mu bio.—Yesaia 26:19.
“Awufoɔ deɛ, wɔnnim biribiara.”—Ɔsɛnkafoɔ 9:5.
Atosɛm a Ama Onyankopɔn Ayɛ Otirimɔdenfo
Nnipa pii gye di sɛ Onyankopɔn twe abɔnefo aso afebɔɔ. Enti Onyankopɔn yɛ bɔne? Sɛ yewu a dɛn na esi?
Dɛn na Bible Ka Fa Ɔkra Ho?